FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIOMPY AOSTRALIANINA KELY INDRINDRA SY SARY - ALIKA
'Ity i Lewis, fantatra ihany koa amin'ny hoe Lewey aseho eto amin'ny 1 1/2 taona. Lehilahy tia mifaly sy tsara toetra izy amboa ary namana tsara. Tena manan-tsaina sy be fitiavana izy. Mbola tsy nahita alika velona, ​​bouncier aho! Milanja 10 pounds eo ho eo izy ary manana fleck manga kely amin'ny maso iray. Tato ho ato izy dia nanampy ny zanakay vavy tamin'ny 'fiompiana' akoho miverina ao amin'ny peniny. '
Lisitry ny alika mpiompy aostraliana afangaro kely
Mpiandry ondry amerikana kely
Mpiandry aostraliana avaratra amerikana avaratra
Mpiandry kely aostralianina
Mpiandry ondry kely Aussie
Mpiandry ondry amerikana avaratra
Ny Miniature Australian Shepherd (North American Miniature Australian Shepherd) dia manana palitao lava salasalany. Izy io dia misy loko manga na mena, tricolor mena na mainty, misy marika fotsy sy / na mena. Ny volo manodidina ny sofina sy ny maso dia tsy tokony ho fotsy. Ny palitao dia mety mahitsy na somary somary lava, ary tokony misy volom-borona eo an-damosin'ny tongony, ary misy mony sy feta manodidina ny hatoka. Ny volo amin'ny loha, eo alohan'ireo forelegs ary eo ivelan'ny sofina dia fohy kokoa noho ny sisa amin'ny palitao. Ny avaratra dia mitovy halava amin'ny mialoha. Ny tampon'ny karandohany dia somary fisaka sy voadidy madio. Boribory ny tongotra ary matevina. Ny molotra tsy mihantona ambonin'ny valanorano ambany.
Ny mpiandry ondry aostralianina kely dia alika kely tsy tapaka ary maharitra milalao. Be herim-po, tsy mivadika ary be fitiavana izy ireo, ary mpiara-miasa tsara amin'ny ankizy mahay miaraka amin'ny ankizy mavitrika. Mpinamana be sy mpiambina. Tena velona, ​​mailamailaka ary mihaino izy ireo, maniry ny hampifaly amin'ny fahatsapana fahenina momba izay tadiavin'ny tompony izy ireo. Ny mpiandry ondry aostralianina kely dia marani-tsaina ary mora zatra. Mety hanjary hatahotra sy hanimba izy ireo raha avela irery be loatra nefa tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Mila asa hatao izy ireo, satria tena manan-tsaina, mavitrika ary mora mankaleo ilay karazany. Araraoty tsara ny alikao rehefa alika kely io mba hialana amin'ny fiahiahiany olon-tsy fantatra. Ny sasany maniry ny hikapoka ny voditongotry ny olona amin'ny fikasana hitondrana azy ireo. Mila ampianarina izy ireo fa tsy ekena ny fiompiana olona. Mpiara-miasa tsara, mahafinaritra azy koa ny miasa tahiry kely. Mpiasa mangina izy ireo. Matetika ity karazany ity dia tsy mahery setra alika. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia canine fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Haavon'ny kilalao: 10 - 14 santimetatra (26 - 36 cm)
Kilanjan'ny kilalao: 7 - 20 pounds (3 - 9 kg)
Haavo kely: 13 - 18 santimetatra (33 - 46 cm)
Milanja kely: 15 - 35 pounds (6 - 16 kg)
Misy ny mifanindry amin'ny vehivavy satria Toy ny milely be volo mety milanja mihoatra ny Mini mahia.
Ny fototarazo ho an'ny lokon'ny merle tsara tarehy dia mitondra singa jamba / marenina ihany koa. Tsy azo atao izany raha tsy amin'ny hazo fijaliana merle / merle. Ny ankamaroan'ny mpiandry ondry amerikana avaratra amerikana avaratra dia heterozygous merles (ny ray aman-dreny iray dia mirona, ny iray kosa mafy orina) ary ireo tandindona ireo dia tsy atahorana hanana olana ara-pahasalamana manokana noho ny lokony. Aza hadino ny mijery ny fandrenesana amin'ny alika kely. Ny olana eo amin'ny valahana sy ny maso dia mety hitranga. Alao antoka fa ny sire sy ny tohodran'ny alika kely dia voasedra ary voamarina mazava alohan'ny fividianana alika kely. Ny alika mpiandry sasany dia mitondra ny tsimokaretina MDR1 izay mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny zava-mahadomelina sasany izay tsy maninona raha manome alika hafa, fa raha voasedra tsara ho an'ity fototarazo ity dia mety hahafaty azy ireo.
Ny Miniature Australian Shepherd dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy hiala amin'ny tokotany kely. Ity karazana ity dia hahomby amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Mila entina ny Mini Aussie mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Ity alika kely mavitrika ity dia mila fanatanjahan-tena mahery vaika mba hijanonany endrika, na ny tena tsara, ny tena asa tokony hatao.
Ny palitaon'ny Mpiandry Aostraliana Miniature dia mora taovolo ary tsy mila fiheverana kely. Borosio indraindray amin'ny borosy mafy volo ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Nisy programa fananahana mba hampiroboroboana ny Miniature Australian Shepherd (North American Miniature Australian Shepherd) dia natomboka tamin'ny 1968 tamin'ny fampiasana kely Mpiandry Aostraliana . Ireo mpiompy dia nampitombo azy ireo tamin'ny habe mba hamokarana alika kely kokoa ary ankehitriny dia manohy miezaka ny hamorona sary fitaratra an'ny Mpiandry Aostraliana amin'ny habe izay mifanaraka amin'ny fomba fiainana ankehitriny, nefa tsy mahafoy tena, fahaizana na toetra amam-panahy.
Ny klioba lehibe any Etazonia dia ny Miniature Australian Club any Etazonia. MASCUSA, amin'ny maha klioba ray aman-dreny azy, dia nangataka tamin'ny American Kennel Club mba hampidirina ao amin'ny AKC. Ny fizotry ny fanekena amin'ny AKC dia manomboka amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny AKC Foundation Stock Service. Ny Australian Shepherd Club of America dia nanaiky ny Miniature Australian Shepherd IHANY raha nanova ny anarany ny Miniature ary tsy misy firesahana na inona na inona karazana momba ny Mpiandry Aostraliana na ny tantarany. Be dia be ny tompona mpiandry ondry aostralianina misoratra anarana amin'ny AKC FSS. Ny anarana ofisialin'ny AKC dia Miniature American Shepherd.
ASDR = Registra an'ny alika amerikana
MASCA = Klioban'ny mpiandry ondry aostralianina vitsy an'isa
MASCUSA = Klioba Aostraliana kely indrindra any Etazonia
Phoebe the Toy Australian Shepherd amin'ny faha-3 taonany
Cooper, alika kely mpiandry ondry aostralianina kely 11 taona
Vera Mpiandry Aostraliana Mini amin'ny 6 volana— 'Vera manana toetra manokana. Tena mazoto sy tia milalao fika izy. Alika tsara izy. '
Sary natolotry ny Miniature Australian Shepherd Club of America
Ity i Roo ilay mpiandry ondry bitika aostraliana kely avy any Wee Mini Aussies any atsimon'i California amin'ny faha-8 volana.
'Zoe dia mpiandry ondry aostralianina kilalao. Efa ho 9 volana izy tamin'ity sary ity. Alika kely mavitrika be izy, ary hendry koa! Ny tetika nampianariko azy ihany no hataony raha misy sakafo tafiditra. Tiany ny milalao miaraka amin'ny saka Simba sy Pug Bindi anay, roa taona. Zoe dia milalao baolina tenisy kely, ary aleony ihany mitsako ny karipetra avy eo taolana mandinika rawhide , izay iray amin'ireo fahazaran-dratsiny, miaraka amin'ny fiakarana amin'ny latabatra fitsangantsanganan'ny zanako vavy ary mangalatra sakafo . Ao amin'ny sary Zoe dia 'manofahofa tanana', iray amin'ireo hafetseny vaovao farany. '
'Ity no zanako mpiambina Australian Australian Jaxi. 4 1/2 volana eo amin'ity sary ity izy, milanja 11 pounds. '
Dakota ilay Mpiandry aostralianina bitika izay nametraka tao anaty fasika miaraka amina siny lapa mavo
Dakota mpiandry ondry aostralianina kely indrindra
Alika kely mpiandry ondry Teacup Australian Shepherd amin'ny faha-3 volana, sary natolotry ny City Slickers Ranch
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Mpiandry Aostraliana Miniature
Sary kely mpiandry aostralianina sary 1
Sary vitsivitsy an'ny mpiandry aostralianina 2
Pitbull vehivavy 1 taona
maso manga mpiandry ondry anglisy taloha
orona mainty alika mivadika mavokely
zanak'ondry mpiompy australiana mpiompy spaniel afangaro alika kely hamidy